Puntland: Xukuumad Xil-Gudan-Waa Ah iyo Baarlammaan Dantiis Gute Ah – MAQAAL | Goojacade
Home Maqaal Puntland: Xukuumad Xil-Gudan-Waa Ah iyo Baarlammaan Dantiis Gute Ah – MAQAAL
Puntland: Xukuumad Xil-Gudan-Waa Ah iyo Baarlammaan Dantiis Gute Ah – MAQAAL
Arrimahaas iyo kuwa kasii badan bay dadwaynihii taageerayay goaanka baarlammaanka ku macneeyeen in baarlammaanku ugu danbayn garwaaqsaday tallaabaduu qaadayna ku saleeyay. Maxaa xigay. Durba waxaa soo ifbaxay in gilgilashadii baarlammaanku xaqiiqdii noqotay baroortu orgiga ka wayn, iyo in dano gurracan oo aan shacabka loogu danaynayn laga lahaa rididdii xukuumadda. Waxaa caddaatay in labadii gole oo isla xisaabtanka la isugu miisaamay heshiiyeen, oo qolo waliba danteedii gaartay, danta kaliya oo meesha ka maqanse noqotay tii ummaddii xilka loo hayay, oo iyadoo daallan, duruufaysan, abaar kasoo doogna ah dusheeda lagu macaashayo. Waxay xaajo kusoo ururtay col ku dhac oo tuugo kuu ciidamisay. Ninkaad xil ama xoolo u dhiibatid oo ku dayaca waxaa kaaga xanuun badan kaad ku aammintid kuula xisaabtankiisa oo ku gaba, ku khiyaama amaba labadaba isku darsada. Waa yaabe Baarlammaanku Xukuumaddii ay rideen waxqabadkeeda ma waxaa la tusay markay rideen kaddib. 47 mudane baa markii hore ridday, markii danbane 61 baa gacan-taag dheer ku ansixisay golihii wasiirrada oo aan isbaddal ka muuqan. Dharaar cad bay rideen oo khaladaadkeeda arkeen bulshadana u sheegeene, ma habeen mugdi ah bay wanaaggeeda arkeen. Sidee loo tusay, afkee ama fartee lagu fahamsiiyay, sowtay ku sababeeyeen riditaankeeda xil gudasha la’aanta. Mise dhowr-ka qof oo la reebay bay xukuumadduba ahayd? Sow dhowrka qof oo la reebay haddii loo jeeday gaar looguma yeeri karin goluhuna xasaanaddana kalama noqon kirin haddii loo baahdo. Dadku waxay iswaydiinayaan haddii heshiisyada xukuumaddu gashay ama xeerarka kale oo ansixinta loo rabay ay dhammays iyo xalaal wada yihiin maxaa keenay in xoolo lagu bixiyo si xildhibaannada looga fujiyo. Haddaan heshiisyada iyo xeerarka wax ka qaldanayn in laaluush lagu xiro waa xadgudub, haddii wax ka dhimanayeenna in laaluush lagu sii daayo waa xad gudub kale. Tan danbe baana dadku usii walwal badan yihiim. Calooshadaada ciirin looma qariyee, haddii waxaa xukuumaddu baarlamaanka ka fujisay aysan wada saxnayn sow wax shacabka ku maqan, ama wax ka maqan maaha? Dhanka kale waxaa nasiib darro noqotay in waxyaalahaasi dhacayeen iyadoo Puntland looga diyaar garoobayo xuska sannad guuradii 19-aad ee aasaaskeedii. Waxaa dad badan niyad jab iyo saluug ku keeenay meesha la joogo iyo hab dhaqanka dowladnimo ee muuqdaa in uusan ahayn kii lagu taamayay in 19 sano kaddib loo dabbaal dago. Waxaa xusid mudan in Puntland oo leh xukuumad ka kooban 9 wasaaradood oo kaliya ay dadku sidan ka qaneeca roonaayeen kana tabasho yaraayeen, degaamada Puntland maamushana inta ka badnaayeen, haddoo xubnaha golaha xukuumaddu tiro beel ku dhow yahayna qanicii dadku hoos u sii socdo. Waxaa meesha ka maqan waa kalsoonidii dadku ku qabi lahaa dowladda iyo hoggaamiyaasha oo sii yaraanaysa, meeshii la baxnaani lahaana tallaabooyinkii ugu danbeeyeey ee labada gole qaadeen waxay daqarro waaweyn kusii dhufteen kalsoonidii shacabka oo in la kobciyo loo baahnaa si dowladnimo taam ah loo gaaro. Golaha wakiilada Puntland waxaa dastuurku huwiyay karaamayn iyo xasaanad dheeri ah waana astaan muhiim ah oo laga dheehan karo maqaamka dowladnimo hadba heerka uu joogo. Haddana xasaanada iyo karaamadu ma aha xuquuq joogto ah oo loo dhasho ee waa xurmo u baahan in markasta la ilaaliyo oo aan la wiiqin. Waxaa nasiib darro ahayd sida la sheegay in maalmihii dhawayd ee wax la is dhaaf-dhaafsanayay ay dadka dhulka iibsadaa qaarkood shaki ka muujiyeen inay dhul ka iibayaan xildhibaanno danaynayay dhul, iyadoo shakigaas sabab looga dhigay siyaabaha aad malaynaysaan. Soo Jeedin:
Dadka Soomaliyeed waxay caan ku yihiin soo celin la’aanta ciddii mar hoggaanka u qabatay waana sababta masuuliyiinta qaar ku-darsiga u baadi goobaan marka xilkoodu dhammaadka yahay. Laakiin cidda ka hoos shaqaysa ama la shaqaysata in badani waa ka dhuumataa indhaha shacabka oo ku callaqan kolba cidda hoggaanka sare ah. Haddaba waxaa habboon in xubnaha golaha wakiilada ee soo socda ka mid noqoshadooda laga dhawro cid kasta oo lagu ogyahay ka qayb qaadashada xil-xoolo ku beddelesho. Ugu danbayntii, waxaa xaqiiqo ah in dad badan oo reer Puntland , Soomaali iyo shisheeyaba leh oo indhaha ku hayay wixii socday ay ka niyad jabeen dhacdooyinkii siyaasadeed iyo maamul oo maalmihii ugu danbeeyay Puntland hareeyay iyo sidii wax loo maareeyay. Haddaan laga xumaan, laga hadlin, la diidin hab-dhaqankaas-na ay taasi aqbal beddelkeeda noqonayso. Puntland iyo dowladnimadeeda sinnaba aammusku hiil uguma ahan. Inta sidaas wax yihiin, sida loo dhaqmayana aan wax laga beddelayn, way adkaan doontaa in shacabku kalsooni u dhahaan ama kor ugu dheeraystaan hal ku dheggii ahaa “Ku-dayo-Puntland” sidoo kalena waxaan shaki ku jirin in dad badan oo Puntland la dhacsanaa diyaarna u ahaa “Ku-dayo-Puntland”ay dib u guran doonaan markay maqlaan baaqaas. Abdirizak Abdulle Farah Goojacade.com Garowe-Puntland Email:-Goojacadewebsite@gmail.com]]>
Previous articleDaawo Video Ducaysane "Baarlamaanka Puntland waxay ku sifaysan yihiin BURCADBADEED, Waana in sidii Burcadbadeedii loola dagaalamaa
Next articleXogta Goojacade: Magafeyaashii Laga Soo Qabtay Koonfurta Suudaan Oo Laga Sii Daayey Xabsiyada Muqdisho